Ukuphupha iZebra Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iqwarhashe, elaziwa njengehashe lengwe, lizalelwa kwilizwekazi laseAfrika. Ngokunxulumene needonki kunye namahashe, yinto etya uhlaza ehlala emhlambini kwaye uzive ukhuselekile kuphela ngokudibana namanye amaqwarhashe. Njengazo zonke izilwanyana ezitya utyani obutyiwayo, ixhatshazwa ngamarhamncwa anjengeengonyama.
Imivimbo emnyama namhlophe isebenza ukubadida abo babazingelayo. kufuneke i. Iimpukane kunye neempukane zincinci kakhulu amathuba okuba zihlale kubomvu obunemigca kunasehashini elinombala omnye; ezinye izinambuzane eziyingozi zixosha amaqwarhashe ngomsila kunye nenquma ekugqibeleni.
Ukuwela kweqwarhashe, ekufanele ukuba kuqinisekiswe ukuba abahamba ngeenyawo bawela isitalato ngokukhuselekileyo, bafumana igama eliqhelekileyo kulo mzobo wengubo. Kukho imizamo ephindiweyo yokulawula i-zebra kwaye uyijike ibe sisilwanyana sasekhaya, kodwa ngempumelelo eyiyo. Iqwarhashe sisilwanyana sasendle esivakalelwa kuphela ekhaya emathafeni abanzi.
Kodwa iqwarha lenza ntoni kumaphupha ethu? Ukutolika kwamaphupha kulichaza njani iqwarhashe?
1 Uphawu lwephupha «Zebra» - Ingcaciso ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Zebra» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Zebra» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Zebra» - Ingcaciso ngokubanzi.
Eyona nto kugxilwe kuyo ekutolikeni amaphupha yimigca yeqwarasi, eku- izichasi bhekisa. Njengophawu lwephupha, iqwarhashe libonisa ukuba umnyama nomhlophe, efanekisela ithamsanqa kunye nokungonwabi okanye okuhle nokubi, kufuneka zibonwe kunye. Ihlabathi Akumnyama okanye mhlophe, iphupha kufuneka libe namacala omabini.
Ukuba wonwabile kakhulu, iphupha liyakuxwayisa ukuba ungalibali amacala amnyama. Ukuba awonwabanga, iqwarhashe liyisikhumbuzo sokuba yonke into ineendawo zayo ezilungileyo.
Isimboli yephupha ingabonisa ukuba iphupha kamva Imvisiswano Ukulangazelela, nokuba kubume bakhe okanye kuye.
Okulungileyo nokubi kusondele kakhulu, kodwa banokutolikwa ngendlela yokuba ukuphupha kujongane nomzuzu wokuxhuzula apho uvuyo nosizi ziya kuhamba nazo.
Ngapha koko, imivumbo yeqwaras ingasetyenziselwa isanga kuba. Ke iqwarha ekutolikeni amaphupha likwasetyenziswa njengesikhombisi imbambano okanye ukungcatsha phakathi kwabahlobo. Umhlobo ayikho le nto ibonakala ngathi, ukuphupha akufuneki kuthembele ngaphezulu, kodwa jonga ngononophelo ukuba ngubani omthembileyo kwaye ngubani ongangcono. Unokufumana ukungabi nambulelo kwixa elizayo okanye umntu othile azame ukukuxhaphaza.
Ukuba ukuphupha ubona iqwarhashe emathafeni, oko kufanele ukuba kubonise ububhanxa entloko, ukuphupha kunento encinci kakhulu ngezinto ezinzulu nezibalulekileyo, kodwa uthathwa nangubani na. hlukanisa ukuphazamisa.
Uphawu lwephupha «Zebra» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, iqwarhashe lisephupheni Kunzima ukwenza izigqibo.. Ukuphupha kunengxaki ekuthatheni isigqibo. Unokukhetha okuninzi onokukhetha phakathi kweendlela ezimbini ezichaseneyo.
Uphawu lwephupha lukuxelela ukuba ulinganise ngononophelo kwaye ugcine engqondweni ukuba ebomini akukho mhlophe mhlophe okanye mnyama, kodwa uninzi lwee-shades ezahlukeneyo kunye nemibala.
Ke, ephupheni, iqwarhashe likwalumkisa ngokuchasene nokufuduka kumzi wakho okanye komnye umntu. Ingozi khokelwa. Kuyasikhuthaza ukuba sivule ngakumbi kwihlabathi kunye nabantu esingabaziyo kwaye singasondeli kwizinto ngombono osele uqalile.
Kungangumqondiso wokuba ukuphupha kumalunga okanye kufuneka ujongane nezihloko ezingathandekiyo okanye ezigabadeleyo, kungafuneka utsibe isithunzi sakho.
Uphawu lwephupha «Zebra» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya yokutolika, iqwarhashe limele oko ukuvumelana kwendalo yonke, ngomanyano lwezichasi.
Iphupha Ngeendlebe Zengqolowa